Inona no Hanampy Anao Hahazo ny Baiboly? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Sarotra be ve ny mahazo izay lazain’ny Baiboly?
Tenin’Andriamanitra ny Baiboly. Toy ny taratasy avy amin’ny ray be fitiavana izy io. (2 Timoty 3:16) Lazain’Andriamanitra ao hoe inona no azontsika atao mba hampifaliana azy, nahoana no avelany hisy ny fijaliana, ary inona no hataony ho antsika amin’ny hoavy. Nandika vilana ny Baiboly anefa ny mpitondra fivavahana, ka lasa be dia be no mihevitra fa tsy ho azo mihitsy izay lazain’izy io.—Asan’ny Apostoly 20:29, 30.
Tian’i Jehovah Andriamanitra hahafantatra ny marina momba azy kosa isika, ka nataony mora azo ny Baiboly.—Vakio ny 1 Timoty 2:3, 4.
Inona no hanampy anao hahazo izay lazain’ny Baiboly?
Tsy nanome ny Baiboly fotsiny i Jehovah fa manampy antsika hahazo izay voalaza ao koa. Naniraka an’i Jesosy izy mba hampianatra antsika. (Lioka 4:16-21) Nanonona andinin-teny foana i Jesosy rehefa nampianatra, mba hahazoan’ny olona ny Soratra Masina.—Vakio ny Lioka 24:27, 32, 45.
I Jesosy no nanomboka ny asa fitoriana, ary nanorina ny fiangonana kristianina izy mba hanohy an’io asa io. (Matio 28:19, 20) Manampy ny olona hahazo izay lazain’ny Baiboly momba an’Andriamanitra koa ny tena mpanara-dia an’i Jesosy ankehitriny. Vonona hanampy anao ny Vavolombelon’i Jehovah raha te hahazo izay lazain’ny Baiboly ianao.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 8:30, 31.
Baiboly Fitaovana Fianarana Baiboly